Chard iyo omelette farmaajo, saxan fudud oo fudud. | Cuntooyinka Jikada
Montse Morote | 02/09/2021 09:00 | La cusbooneysiiyay 28/08/2021 18:26 | Cunnooyinka khudradda, Cunnooyinka caafimaadka leh, Cunnooyinka fudud
Chard Swiss iyo omelette farmaajo, saxan fudud oo degdeg ah oo la sameeyo, ku habboon casho fudud. Saxan leh khudaar iyo ku darista farmaajada ayaa siinaysa dhadhan kale oo aad u fiican.
Intee in le'eg ayay ku kacaysaa cunista khudaarta, waa inaad ogaataa sida loo soo bandhigo, in kasta oo aan u malaynayo inay u fududahay in khudaarta la siiyo kuwa yaryar marka loo eego kuwa waaweyn, kuwa waaweyn si fudud looma khiyaameeyo. Saxankaan chard omelette leh farmaajo waa ku habboon, habkan way fududaan doontaa in la cuno omelet -ka chard.
Chard waxaan ku samayn karnaa cuntooyin badan oo kala duwan, sidoo kale waxay ku habboon yihiin in lagu rido maraqa iyo maraqa.
Nooca cuntada: tortillas
1 farabadan oo chard Swiss ah
50 gr. jiis jiis
1 diyaarad oo saliid ah
Waxaan marka hore nadiifin doonaa chard. Waxaan dhaqnaa caleemaha annaga oo ka saarey xargaha, jarjar yar yar. Kadib waxaan karineynaa chard dhowr daqiiqadood, waxaa lagu karin karaa microwave ama uumiga, waa kaliya si ay u noqdaan kuwo aad u jilicsan oo ku fiican omelette.
Waxaan ku ridnay 4 ukun baaquli, garaac. Ku dar farmaajada jiiska, chard iyo milix yar haddii aad rabto, iyada oo ku xidhan farmaajo uma baahnid milix. Wax walba si fiican ayaan u garaacnay, waxaad ku dari kartaa xoogaa ukun cad ah, si omelette wanaagsan looga tago iyada oo aan lahayn jaallo badan.
Waxaan ku ridnaa digsi kuleyl dhexdhexaad ah oo leh dhowr dhibcood oo saliid ah, markay kululaadaan waxaan ku darnaa dhammaan walxaha tortilla. Waan u oggolaannay inay karsato ilaa aan aragno inay billaabmayso inay curlaamiso oo ay dhammaan ku wareegsan tahay hareeraheeda, waan soo jeesannaa, waxaan u oggolaannaa inay dhammaystirto karinta ilaa heer qof walba jecel yahay.
Waxaan soo saareynaa tortilla, ku rid saxan ama saxan oo isla markiiba u adeegno. Diirku aad buu u fiican yahay maadaama farmaajo uu dhalaalay aadna wuu u wanaagsan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Cunto gaar ah » Cunnooyinka fudud » Chard Swiss iyo omelette farmaajo
Galab wanaagsan, waxaan munaasabadda ka dhigayaa mid ku habboon inaan kaaga mahadceliyo buuggaaga cuntada sida had iyo jeer aad u kala duwan oo dhadhan fiican leh, waxaan raacaa cuntadaada maalin kasta, mahadsanid
Ku jawaab luis gonzalo valverde